Alatsinainy 08 Jolay 2019. – FJKM
Alatsinainy 08 Jolay 2019.
Fandalinana ny Boky ROMANA
Mpanota ny olombelona rehetra . Tanisaina eto ireo fahotan’ny Jentilisa
1-Mahafantatra an’ Andriamanitra ny Jentilisa nefa nisafidy ny hanompo sampy
Mazava araka ny and 19-20 fa nasehon’ Andriamanitra ny maha- izy azy tamin’ny alalan’ny asa fahariana nataony.Mahafantatra izany na ny Jentilisa aza . Safidin’ny Jentilisa ny nanonompo sampy, fa tsy vokatry ny tsy fahalalany an’ Andriamanitra akory. Fankalazana sy fisaorana Azy no asa tokony ho nasetrin’ny olona ny fahafantarana ny momba an’ Andriamanitra . Tsy izany anefa no nataony araka ny voalaza ao amin’ny and21 .
2-Ny vokatry ny fanompoan-tsampy nataon’ny Jentilisa
Anankiroa ny vokatry ny nisafidian’ny olona hanompo sampy (and 25)
a)- Natolotry ny Tompo ho amin’ny fahotana rehetra izy, izany hoe : navelan’ Andriamanitra hanota , natolotra ho amin’ny filan’ny nofo ( and24-25) , ny filan-dratsy mahavoafady (and 26-27) ny fisainana tsy mahamendrika (and28-32) .
b)- Nandatsahan’ny Tompo ny fahatezerany izy
Hoy ny voasoratra eo aminn’y and 18 : « Fa aseho avy any an-danitra ny fahatezeran’ Andriamanitra amin’ny faharatsiana rehetra sy ny tsi-fahamarinan’ny olona izay misakana ny fahamarinana amin’ny fanaovan-dratsy »
« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra« Boky faha-8